Annaga nagu saabsan - Wuxi Reliance Technology Co., Ltd.
Hal qayb oo ka mid ah Wuxi Reliance Technology Co., Ltd
XPE CAR MATS
JAAMACADA BAABUURTA TUFED
XPE TRUNK MATS
GELVET TRUNK MATS
BOOLKA DASHBOORKA BAABUURTA
Hal qayb oo ka mid ah Wuxi Reliance Technology Co., Ltd.
Wuxi Reliance Technology Co., Ltd. waa soo-saare xirfad leh oo soo saarta alaabta gudaha ee baabuurta, oo ku taal meel u dhow harada quruxda badan ee Tai oo leh gaadiid sahlan.
La asaasay 2005tii
Summada ugu weyn
Iyadoo [Relience] ay tahay astaanta ugu weyn
Alaabta ugu muhiimsan
TPE buuxa iyo gogosha caafimaadka XPE iwm
Wuxi Reliance Technology Co., Ltd. waa soo-saare xirfad leh oo soo saarta alaabta gudaha ee baabuurta, oo ku taal meel u dhow harada quruxda badan ee Tai oo leh gaadiid sahlan. Tan iyo markii la aasaasay 2005, shirkaddu waxay u heellan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, naqshadeynta, soo-saarka iyo iibinta qalabka gudaha ee baabuurta iyo qalabka la xiriira.
Waxa aan Sameyno
Shirkadeena waxay inta badan soo saartaa caafimaad badan, badbaado badan, deegaan saaxiibtinimo badan iyo gogosha baabuurta ee waarta iyo agabka. Shirkaddu waxay fulisaa maarayn cilmiyeed oo horumarsan, waxay dejisay nidaam hubinta tayada adag, waxayna ku gudubtay shahaado nidaamka maaraynta tayada, si tayada alaabadu u hesho dammaanad la isku halayn karo. Shirkaddayadu waa alaab-qeybiyaha shirkado badan oo baabuurta gudaha ah oo caan ah; Isla mar ahaantaana sidoo kale waa alaab-qeybiyaha muddada-dheer ee in ka badan 1000 ka ganacsada baabuurta gudaha.
Iyadoo [Relience] oo ah astaanta ugu weyn, alaabadayada ugu muhiimsan waa: TPE buuxa iyo gogosha cagaha caafimaadka XPE, sariiraha cagaha ee baabuurta caalamiga ah, sariiraha cagaha la gooyo, oo aan helnay shatiyo khuseeya. Alaabooyinkayagu waa kuwo dabiici ah, kuwo aan sun ahayn, kuwo aan wasakhayn oo deegaanka u saaxiib ah, kuwaas oo aan kaliya u keeni doonin nadaafadda baabuurkaaga, laakiin sidoo kale waxay ku siinayaan dareen diiran oo raaxo leh, waxaana jecel inta badan ganacsatada iyo milkiilayaasha baabuurta. .
Shirkaddu waxay leedahay shaqaale farsamo oo xirfad leh, qalabka heerka koowaad iyo habka wax soo saarka sare. Sannadkii 2013, shirkaddu waxay maalgashatay warshad cusub oo ah TPE/TPR/TPO/EVA modified/PE wax ka beddelka alaabta ceeriin ee granule. Ilaa hadda, Wuxi Reliance Technology Co., Ltd. waxay leedahay tignoolajiyada dhamaystiran iyo khadka wax soo saarka laga bilaabo wax soo saarka alaabta ceeriin ilaa alaabada dhammaatay iyo wax soo saarka alaabada dhammaatay. Qalabka ceeriin ee TPE iyo alaabooyinka dhammayska tiran ee sagxadaha sagxadda ayaa ka gudbay imtixaanka SGS ee Volkswagen, North American Ford, Daimler-Benz iyo heerarka kale siday u kala horreeyaan, oo hadda waxay noqotay shirkad wax soo saar oo xasilan oo taageera OEM-yada waaweyn.
SHAQO CAJIIB AH OO AY KOOXDEENU WAXAY KU QABTEEN MACAMIISAYADA!
WAA MAXAY MACAAMIISHA
Markii ugu horeysay ee aan helay baabuurkayga cusub, waan dalbaday, waxaan ku riday sanduuq, waxaan dhigay qorraxda in yar oo nus saac ka yar oo ay diyaar u yihiin in la geliyo.
Daboolista kuwan waa kuwo cajiib ah, gaar ahaan marka la tixgeliyo barta qiimaha. Walxaha caagga ah ee adag waxay caawiyaan inay dareeraha ku qabtaan oo ay qashinka ka saaraan roogayga.
Waxaan gabi ahaanba kuwan kula talin lahaa qof kasta oo raadinaya gogosha sagxadaha la isku halayn karo oo qiimo gaar ah leh.
Kuwani waa sagxadaha sagxada wanaagsan ee daboolaya meel ka weyn sariiraha Cimilada. Uma dhumuc weyn yihiin sida Weathertech laakiin dhab ahaantii si fiican ayaan iyaga uga helaa.
Si fiican u eeg oo si fiican ugu habboon baabuurkayga. Waxay u muuqataa inay tahay liner tayo wanaagsan laakiin waqti ayaa sheegi doona. U eeg inay tahay inay kor u qaadaan.